Wondershare TunesGo Ochie User Guide | Wondershare
Export music na faịlụ
Hazie Ndi ana-akpo
Apple Ngwaọrụ Nyefee
Olee otú mbupụ Music, Videos, Ndetuta egwu ọkpụkpọ na ihe iTunes & PC?
Mbụ, Jikọọ na ngwaọrụ gị (s) site na eriri USB (s) na-emeghe omume window.
Olee otú mbupụ Music, Video, Ndetuta egwu ọkpụkpọ na ihe iTunes & PC?
Mbupụ niile mgbasa ozi na gị iPhone / iPod / iPad ka iTunes Ọbá akwụkwọ, pịa "Iji iTunes" ke akpan window. Nke a uche na-enyere gị mbupụ music, listi ọkpụkpọ, videos, pọdkastị, audiobooks, artworks, wdg si gị Apple ngwaọrụ iTunes. Ọ bụrụ na gị na mkpa iji idetuo music si na ngwaọrụ gị na iTunes Library, ị kwesịrị ị na-aga Music window ka mepụta ọrụ.
Ma ọ bụ, ị nwekwara ike nyefee ọ bụla media ka iTunes ma ọ bụ PC na media management window. Nanị pịa faịlụ na ị chọrọ mbupu, wee pịa Export bọtịnụ na menu mmanya. Ị pụrụ ọbụna kpọmkwem mbupụ media faịlụ gị iTunes Ọbá akwụkwọ, gị na kọmputa na ọbụna gị ndị ọzọ iDevices.
Olee otú jikwaa Media
Olee otú mbubata Media
Mbubata music, videos, TV na-egosi, music videos, Pọdkastị, iTunes U, na Audiobooks, nnọọ pịa Media na ekpe kọlụm, mgbe ahụ, ma pịa music, video, wdg wee pịa triangle n'okpuru "Tinye" button> "Tinye Njikwa "ma ọ bụ" Tinye nchekwa ". Nke a ga-eme ka gị Windows faịlụ nchọgharị, site na nke ị nwere ike họrọ faịlụ mbubata site na PC gị.
Tọghata Video / Audio na iOS akwado Format
Mgbe ị họrọ a Apple ngwaọrụ kedi video ma ọ bụ music faịlụ mbubata, usoro ihe omume ga-akpali gị ma ma ọ bụ na-ngwa ngwa tọghata faịlụ ka ihe iOS kachasị usoro. Na ọtụtụ ikpe a na-atụ aro. I nwekwara ike wepụ MP3 si video faịlụ mgbe na-agbakwụnye videos gị music playlist.
Olee otú jikwaa Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Ị nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ na gbakwunye music na video, wdg. gị iDevices. Right pịa Playlist ike ọhụrụ playlist, wee pịa Add button mbubata music na vidiyo site na PC gị.
Olee otú mbupụ / Dezie Ndi ana-akpo
Olee otú mbupụ Ndi ana-akpo
Pịa "Ndi ana-akpo" ke hapụrụ kọlụm. Na kọntaktị, Atiya, kọntaktị na-gosiri iche iche na gị iDevice, iCloud, Exchange, Yahoo! na ndị ọzọ na akaụntụ. Họrọ otu akaụntụ dị ka iCloud ma ọ bụ iDevice si kọntaktị. Ekem, ke Kpọtụrụ ebi ndụ, họrọ gị chọrọ na kọntaktị na pịa bọtịnụ "Import / Export". Họrọ a kwekọrọ ekwekọ edinam si ndọpụta ndepụta. Ebe i nwere ike mbubata / mbupụ kọntaktị site na vCard faịlụ, Outlook Express, Windows Address Book, Windows Live Mail na Outlook 2003/2007/2010/2013. Ọ bụrụ na ị jikọọ ihe karịrị otu iDevice ka TunesGo, ị na-enwe ike ozugbo mbupụ kọntaktị gị ọzọ iDevice.
Chọta oyiri Ndi ana-akpo
Na nke a software, ị nwere ike mfe jikota oyiri kọntaktsị na gị iDevice, iCloud, Yahoo !, Exchange na ndị ọzọ akaụntụ. Pịa "De-oyiri" ịhụ oyiri kọntaktị. Ọ bụla oyiri kọntaktị na nwere otu aha, nọmba ekwentị ma ọ bụ email ga-egosi na gị na ihuenyo maka gị nyochaa. Ị nwere ike wee pịa "jikota Họrọ" ka jikota niile kọntaktị ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ.
Cheta na: TunesGo nwere ike jikota iCloud kọntaktị egosi na iDevice. Otú ọ dị, iCloud kọntaktị echekwara na netwọk nkesa gaghị emelitere kakwa. Tupu merging duplicates, ị ga mma ndabere nile kọntaktị.
Olee otú Tinye New Ndi ana-akpo site na gị PC
Pịa "New" na-emeghe "Tinye ọhụrụ kọntaktị" window. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ị ​​nwere ike idezi aha, email na nọmba ekwentị, ma ọ bụ i nwere ike pịa "Tinye nchekwa" ịgbakwunye website, ụbọchị na adreesị na ndị ọzọ.
Cheta na: The kọntaktị na ị gbakwunye ga-azọpụta na gị iDevice. Nke a software anaghị akwado na-agbakwunye kọntaktị na iCloud, Exchange, Yahoo !, wdg
Olee otú mbupụ Foto na Mepụta Albums
Olee otú mbupụ Photos
Na Wondershare TunesGo, ị nwere ike mbupụ photos gị na kọmputa ma ọ bụ gị na ngwaọrụ. Pịa "Photos" ke hapụrụ kọlụm nke n'ụlọ peeji ahụ, ma na-emeghe a album. Na nke a album, họrọ foto na ị chọrọ mbupụ wee pịa triangle n'okpuru "Export" ịhọrọ nyefee photos gị na kọmputa ma ọ bụ gị ọzọ Apple ngwaọrụ.
Olee otú Mepụta Albums na Tinye Photos
E wezụga exporting photos, ị ka nwere ike ike albums ma tinye ọkacha mmasị gị photos na ya. Nanị nri pịa Photos na ekpe kọlụm ike ọhụrụ album, wee pịa "Tinye" mbubata foto site na kọmputa gị.
Olee otú Hichapụ Photos
Ọtụtụ foto gị iPod, iPhone na iPad, ị chọrọ ka ihichapụ ha ozugbo ka free ohere? ị dị nnọọ mkpa iji họrọ photos na ọbụna albums wee pịa "Hichapụ"
Otú nyefee Data n'etiti iPhone, iPod na iPad
Apple Devices Nyefee
TunesGo-enyere gị aka nyefee media, kọntaktị, foto site na otu Apple ngwaọrụ ọzọ na-enweghị iTunes. Ọ bụrụ na ị ga-achọ nyefee music n'etiti gị iDevices, ị dị nnọọ mkpa pịa "Media" ke hapụrụ kọlụm na pịa "Music" na-abịa ka music window. Mgbe ahụ, pịa triangle n'okpuru "Export ka" iji họrọ mbupụ music gị iDevice.